Airtel Madagascar: mana-talenta miavaka ny Quatuor Squad | NewsMada
Airtel Madagascar: mana-talenta miavaka ny Quatuor Squad
Feno herintaoana izao ny tarika mpanakanto Quatuor Squad, haneho ny talentan’izy ireo ao amin’ny Plaza Ampefiloha, ny 30 septambra ho avy izao. « Nosafidina manokana io toerana io noho ny hampiavaka izao fampisehoana izao, mozika fampiasa amina sarimihetsika », hoy Raboanarison Ravo, avy ao amin’ny tarika, mpitendry lokanga voalohany. « Miavaka ihany koa ny fampisehoana hahitana ireo mpitendry zava-maneno samy amin’ny talentany avy amin’ny karazana mozika samihafa. Maro ireo mpihira efa mpiara-miasa aminay nasaina handray anjara, amin’io fotoana io », hoy ihany Raboanarison Ravo.
Koa naneho ny fanohanany ny tarika mpanakanto Quatuor Squad ny Airtel Madagascar, amin’izay ataony rehetra, noho ny talenta miavaka hananan’izy ireo, karazana mozika hadino teo aloha fa averina ho fantatry ny maro. « Vonona hatrany izahay manohana ny tanora malagasy manatalenta toy izao », hoy Raharilalao Julie, talen’ny tsena ao amin’ny Airtel Madagascar.
Hita ao anatin’ny tarika koa Robison Andry, mpitendry lokanga faharoa, Rabarison Mihamina, eo amin’ny « alto » sy Rakotomalala Kiady, mpitendry lokangabe. « Talenta samy manana ny azy ireo fa mampiray manaitra ny fanamby rehetra, koa mino ny tarika amin’ny fanatanterahany izany », hoy Rakotomalala Kiady, raha naka ohatra amin’ireo mpanatalenta any ivelany.